Ụgbọ elu Amerịka na -ezute mmụba n'ọchịchọ ụgbọ elu maka Jamaica
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ụgbọ elu Amerịka na -ezute mmụba n'ọchịchọ ụgbọ elu maka Jamaica
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Akwụkwọ akụkọ USA
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett (n'aka nri) na -ekele onye isi oche, Global Sales, American Airlines, Kyle Mabry, n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Dallas, Texas na Tọzdee, Septemba 23, 2021.
Ndị na -ahụ maka ụgbọ elu kacha elu n'ụwa - American ụgbọ elu - gwara Minista njem nlegharị anya Hon. Edmund Bartlett na ndị isi ndị ọzọ na -ahụ maka njem nlegharị anya na Jamaica na nzukọ Tọzdee n'isi ụlọ ọrụ ha zuru ụwa ọnụ na Dallas, Texas, na mba agwaetiti ahụ ga -ahụ n'ọnwa Disemba ihe ruru ụgbọ elu 17 na -akwụsịghị akwụsị kwa ụbọchị, ka ọchịchọ maka ebe na -arị elu.
Ndị ụgbọ elu Amerịka kwupụtara na ọ ga -eji ụgbọ elu Boeing 787 n'ọtụtụ ụzọ dị mkpa iji gaa Jamaica malite na Nọvemba.
Ụgbọ elu kwa ụbọchị n'etiti Kingston na Miami na -abawanye site na otu ruo 3 n'ọnwa Disemba na ụgbọ elu atọ na -akwụsịghị akwụsị kwa izu agbakwunyere n'etiti Philadelphia na Kingston.
Njem nlegharị anya Jamaica na ndị isi ụlọ ọrụ njem na -enwe nzukọ n'ofe nnukwu isi iyi Jamaica, United States na Canada.
Ha rụkwara aka na Jamaica tụbara Caribbean n'etiti ndị na-eri ihe na mbara ikuku ezumike ha nke ụgbọ elu America ma gosipụta na ha ga-eji ụgbọ elu Boeing 787 ọhụrụ ha buru ibu, nke buru ibu, n'ọtụtụ ụzọ dị mkpa na Jamaica malite na Nọvemba.
Bartlett sonyeere onye ntụzi njem, Donovan White; Senior Strategist na Ministry of Tourism, Delano Seiveright na osote onye isi njem nlegharị anya maka America, Donnie Dawson. Ha, ya na onye isi oche ndị njem nlegharị anya nke Jamaica (JTB), John Lynch, na -enwe ọtụtụ nzukọ na ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ njem n'ofe nnukwu isi mmalite Jamaica, United States na Canada. A na -eme nke a iji mee ka ndị bịarutere ebe a na -abịa n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ, yana, iji kwalite itinye ego na mpaghara ndị njem.
Mịnịsta na -ahụ maka njem, Hon. Edmund Bartlett, (n'aka nri nke atọ) na Kyle Mabry, osote onye isi ala, Global Sales, American Airlines (n'aka nri nke abụọ); Marvin Alvarez Ochoa, onye na -ahụ maka ịre ahịa Caribbean, American ụgbọ elu (nke atọ n'aka ekpe); Donovan White, Director nke Njem Nleta, (n'aka ekpe nke abụọ); Delano Seiveright, onye ndụmọdụ dị elu na onye na -ahụ maka atụmatụ, Ministry of Tourism (n'aka ekpe) na Donnie Dawson, osote onye isi njem nlegharị anya maka America (JTB). Bartlett duziri nzukọ ya na ndị isi njikwa nke ụgbọ elu ụgbọ elu America n'isi ụlọ ọrụ ha na Dallas, Texas na Tọzdee, Septemba 3, 2.
Ozi nnabata a na-abịa n'agbanyeghị na-ebelata ngwa ngwa njem ụwa niile sitere na mgbasa nke Delta variant nke COVID-19.
N'akụkọ ozi ọma nye ndị njem Kingston, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ kwuru na ha ga -amụba ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ụgbọ elu kwa ụbọchị n'etiti Kingston na Miami site na ọnọdụ nke otu ruo atọ n'ọnwa Disemba ma na -enyekwa ụgbọ elu atọ na -akwụsịghị akwụsị kwa izu n'etiti Philadelphia na Kingston.
Ụgbọ elu na -enye ọrụ na -akwụsịghị akwụsị n'etiti Jamaica na obodo US nke Miami, Philadelphia, New York JFK, Dallas, Charlotte, Chicago na Boston.